Madaxweynaha Suuriya Oo Sanado Badan Kadib Safarkii Ugu Horreeyay Ku Tegay Dal Carbeed – XAMAR POST
Madaxweynaha Suuriya, Bashar Al-Asad ayaa booqasho ku tegay Isutagga Imaaraadka Carabta, safarkaas oo ahaa kii ugu horreeyay ee dal Carbeed uu ku gaaro tan iyo 2011 oo uu bilowday dagaalka sokeeye ee dalkiisa.
Booqashada ayaa muujinaysa sida ay isugu soo dhawaadeen Abu Dhabi iyo Dimishiq, iyadoo sanado ka hor ay Imaaraadka taageeri jireen xooggaga doonaya inay xukunka ka tuuraan Madaxweyne Asad.
Waxa uu la kulmay dhaxal sugaha Abu Dhabi, Sheekh Maxamed bin Zayed al-Nahyan oo sheegay in Suuriya ay muhiim u tahay amniga Carabta, dalkiisana uu doonayo inuu xoojiyo iskaashiga kala dhexeeya xukuumadda Dimishiq, sida ay sheegtay wakalaadda wararka ee dowladda Imaaraadka, WAM.
Intii uu socday dagaalka Suuriya, Madaxweyne Bashar al-Asad ayaa safarro dibedda ah ku aadday dalalka Iran iyo Ruushka, kuwaas oo kaalmadooda milateri ay waxbadan u tartay ninkan mar qarka u saarnaa in laga qabsado caasimadda.
Wakaaladda WAM ayaa sheegtay in labada dhinac ay isla meel dhigeeen “ilaalinta midnimada dhuleed ee Suuriya iyo in ciidamada shisheeye ay ka baxaan waddankaas.”